"Waxaan dooneynaa inaan badino, waanu guuleysanay" - TELES RELAY
ACCUEIL » SIYAASADDA "Waan ku guuleysan doonaa, mar hore ayaan ku guuleysanay"
"Waan ku guuleysan doonaa, mar hore ayaan ku guuleysanay"
In uu cinwaankan 08 March miiska wareegsan abaabulay xarunta qaranka ee Movement for Cameroon Renaissance ee Yaounde-Odza si ay ugala hadlaan xuquuqda haweenka, 2 ahème Madaxwayne ku xigeenka Tiriane Nuux, ayaa sheegay in awooda Yaounde "uu imtixaamo imtixaanka, laakiin kama fekerin [heerka] go'aanka."
Tiriane Noah - (c) DR
Tirrie Nuux, xisbigiisu wuxuu horay u guuleystay dagaalka siyaasadeed ee ka dhanka ah awoodda Yaounde tan iyo bishii October ee 07.
Waxay ku jirtaa xaalad gaar ah oo aan u dabaaldego maalintaas dumarka. Gawaadhida ayaa noo dhigaya imtixaanka, laakiin ma qiyaasi karno heerkayaga go'aankeena. Miyaanan odhanaynin inaynu dhibaatooyin badan ku guulaysanno, aynu xoog dambi lahayn? Waa soo ifbaxday munaasabaddan oo ah inaan awoodi karno inaan ku dhadhaminno dhamaan farxada guusha. Haa, waxaan dooneynaa inaan ku guuleysanno, horeyba xitaa xitaa sababtoo ah falalka cadawgu waa wax aan ahayn muuqaal argagax. Waan ku guuleysan doonaa, waa inaan ku guuleysaneynaa dalkeena, waa inaan ku guuleysaneynaa dadkeena. Waxaan aaminsannahay inaan sameyno, waxay xoojiyaan dadaalkeena iyo go'aaminta maalin kasta. Waxay dilaacday, kun oo Kamto, kun oo Ndocki, kun oo Penda, kun oo Kingue, kun oo Valsero kun Ngono, kun oo Fogue iyo uducaynaya kun oo ka mid ah gabdhaha yar yar iyo dhallinyarada wiilasha, kun oo haween afduubtay haweenka loogu talagalay dembi ah inay ku raaxaystaan ​​xuquuqdooda dastuuriga ah. Dhibaatadoodii, waxay noo bogsiiyeen cabsi. saaxiibo Gacaliye horjeeda diidniintayda siyaasadeed oo ka mid ah dadweynaha oo ah waxa na xukumaan by leexinayeen dabaal maalmood laga fekerayo in ay wax by iyaga ekaysiinaya maalmood rayraynta, ee iidaha iyo Xadgudba dhammaan noocyada, maalinta caalamiga ah waa maalin ku qiimaysay wacyi naagta ka. Tani waa maalinta ama dumarka loo qiimeeyo raadka, saamaynta ay, ay ka qayb qaateen in horumar ah ee dunida oo ay tixgelin by shirkadda dhex ixtiraamka xuquuqda ay u leeyihiin sidii shakhsiyaadka ee guud ahaan. Iyada oo la tixgelinayo wadankayaga, macnaha hadda jira ayaa si ku filan u muujinaya rabshad qaran ee ka dhanka ah haweenka. Usheradayada Michèle Ndocki waa calaamad nololeed ee rabshadahan. Sidee qofku u malayn karaa in nin ama naagtiisa iyo caruurtoodu ay kufsadeen haweeney ay gacmaheeda gacmaheeda ku xannibto, ku dhufatay geeska iyo ku toogtay dhiig qabow! Tani waxay ka dhacdaa nasiib darro dalkeenna. Gacaliyeyaasha qaaliga ah, magaca magaca masuulka dabiiciga ah sida hooyooyinka bani-aadamka, ma joojin karno. Waxaan leenahay waajibaad iyo waajibaad ah inaan ilaalino carruurteena, qoysaskeena iyo dalkayaga. Waan ogahay in hawsha damiir waxbaridda iyo rearm dadka waa ay adag tahay marka aad ogtahay heerka maskaxda ah burbur, taas oo nidaamka this ayaa noo soo siibno, laakiin waa in aan ku tusi dhiirranaan, dulqaad iyo samir. Waxyaabaha ugu adkaa waxay ahayd in la bilaabo oo aynu mar hore qabannay. Waxaan u maleynayaa ANNICK NGALEU, SAMIRATOU, NOUTCHANG, JULIENNE ATSO iyo kuwa kale. Waa in aan hubinno in dabkani marna mar dambe soo baxo. Gacaliye sharaf leh, waa sharaf iyo sharaf ii ah inaan ka tirsanaado kooxdan. Mrc ma aha oo kaliya xisbi siyaasadeed laakiin waa maskaxda, falsafada. Dhibaatadu waxay inaga dhigtay mid xoog badan oo midba midka kale midaysan, wadajirna waan ka gudbaynaa.
Waddanimo noolaan dheer
Waqtiga dheer ee Cameroon nool.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.lebledparle.com/actu/politique/1106947-dans-un-discours-la-2eme-vice-presidente-du-mrc-defie-le-pouvoir-de-paul-biya-nous-allons-gagner-nous-avons-meme-deja-gagne
Ukraine: murashax lama filaan ah oo doorasho madaxweyne ah
DRC: Moses Katumbi wuxuu helay baasaboorkiisa jimicsiga Congo-ka ah - JeuneAfrique.com